मैले त यसरी जितें कोरोनालाई – Everest Pati
मैले त यसरी जितें कोरोनालाई
काठमाडौं। म शान्ता अधिकारी (ढकाल) मेरो घर नेपालमा विराटनगर हो। मोरङ जिल्ला, लेटाङ्गको फडानीमा जन्मघर हो मेरो। अहिले भने म र मेरो परिवार अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित गेथसवर्ग भन्ने ठाउँमा बासोबास गर्दछौं।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? हुँदा हुँदै अमेरिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्क पसेर विध्वंश मच्चाउन थालेको दैनिक समाचार हेर्दै र सुन्दै आएकी पनि थिएँ। संसारका विभिन्न मुलुक हुँदै संसारलाई आतंकित पारेको यो कोरोना भाइरस मेरै घरमा पस्छ भन्ने चाहिँ कल्पना पनि गरेकी थिइनँ ।
तर, सोचेजस्तो गरी समय कहाँ सरल रेखामा हिँड्दो रहेछ र? त्यो महामारी मेरो घरमा पसिहाल्यो, सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै, सचेत हुँदा हुँदै। कसरी पस्यो त्यो अझै पनि मलाइ अन्यौल नै छ। म नै सो भाइरसबाट संक्रमित भएँ।
अप्रिल १७, १८मा ज्वोरो निकै नै बढ्यो। ज्वरोसँगै अब मलाइ खोकी पनि थपियो। छाती फुट्ने गरी खोक्नु पर्ने हुनथाल्यो। यतिञ्जेल पनि अरुबेलाकै जस्तो सामान्य फ्लू नै हो कि भन्ने लागेको थियो। तर खोकी र ज्वरोले अति नै सताउन थालेपछि भने मलाइ मनमा शंका लाग्यो कतै मलाइ कोरोना त हैन?
घरमा म विरामी भइगएँ, आइसोलेसनमा थिएँ । मेरा लागि जाउलो, पानी पकाउने मेरो श्रीमान हुनुहुन्थ्यो तर बाहिर गएर सामान ल्याउन आफ्नो र समाजकै लागि पनि उपयुक्त थिएन। किनकि म संक्रमित भइसकेको थिए र मेरा श्रीमान्लाई संक्रमणको लक्षण नदेखिए पनि के हो के हो? बाहिर निस्कँदा अरुलाई सर्ने पो हो कि भन्ने लाग्यो हामीलाई। हामी निस्केनौं सामान किन्न पनि र अहिलेसम्म पनि निस्केका छैनौं। हामीलाई चाहिने सामान हाम्रो निवासस्थान भन्दा केही नजिक बस्नु हुने बैनी ज्वाइले नै घरसम्म ल्याइदिनु भयो।
पछि मैले थाहा पाए कि म जहाँ काम गर्थें, सोही भवनमा चार जनालाई कोभिड भएको रहेछ। एक हप्तासम्म हामीलाई थाहा भएन कि मैंले काम गर्ने भवनमा संक्रमित पनि छन्। जव सो कुरा थाहा भयो तत्काल नै मैंले काम छोडिदिएकी थिएँ। शान्ता अधिकारी(ढकाल), मेरिल्याण्ड अमेरिका। डिसी नेपाल
कोरोनाभाइरस फैलाउन चीन नै दोषी, गम्भीर अनुसन्धान गर्दैछौँ : ट्रम्प
बाबुरामविरुद्ध उजुरी दिन नेकपा कार्यकर्ता सरकारी वकिल कार्यालयमा